Wakiil kasta oo dhul ah waxay u badan tahay in maalin uun uu la kulmo khatarta musuqmaasuqa. Si kasta oo uu hawl galo, waxa laga yaabaa in uu dhibaato kala kulmo marka uu la kulmo martiqaad loo fidiyey ama uu ka qayb galo go’aan ay ku lug leeyihiin mid ka mid ah qaraabadiisa ama xataa waa in uu kala taliyaa masuul la doortay go’aan xasaasi ah.
Maamulka maxalliga ahi waxay adeegsadaan awoodo badan waxayna la xiriiraan dhageystayaal kala duwan: shirkado, ururo, isticmaaleyaal, bulshooyin kale, maamulo, iwm. Waxay qaataan qayb weyn oo ka mid ah soo iibsiga dadweynaha ee Faransiiska. Waxay qabtaan siyaasado cawaaqib toos ah ku leh nolosha dadka deegaanka iyo dhaqaalaha deegaanka.
Sababahan kala duwan dartood, waxay sidoo kale la kulmaan khataro jebinta ixtimaalka.
Waxaa soo saaray CNFPT iyo Hay'adda La-dagaalanka Musuqmaasuqa Faransiiska, koorsadan online-ka ah waxay la tacaalaysaa dhammaan jebinta ixtimaalka: musuqmaasuqa, eexda, lunsiga hantida dadweynaha, lunsashada, danaha sharci-darrada ah ama saamaynta ganacsiga. Waxay faahfaahinaysaa xaaladaha ka dhasha khatarahaas maamulka dadweynaha ee deegaanka. Waxay soo bandhigaysaa tillaabooyinka ay maamullada maxalliga ahi qaadi karaan si ay u odorosaan ugana hortagaan khatarahaas. Waxa kale oo ka mid ah qaybaha wacyigelinta ee wakiilada dhulalka. Waxay siinaysaa furayaasha si ay si habboon uga fal-celiyaan haddii loo yimaado ama la markhaati furo. Waxay ku salaysan tahay kiisas la taaban karo.
La heli karo iyada oo aan la helin shuruudo farsamo oo gaar ah, koorsadan waxay sidoo kale faa'iido u leedahay aragtida daneeyayaasha hay'adaha badan (Hay'adda La-dagaallanka Musuqmaasuqa Faransiiska, Maamulka Sare ee Hufnaanta Nolosha Dadweynaha, Difaaca Xuquuqda, Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Qaranka ee Maaliyadda, Guddiga Yurub, iwm.), dhulalka saraakiisha iyo cilmi-baarayaasha. Waxa kale oo ay ku baaqaysaa waayo-aragnimada markhaatiyada waaweyn.
READ Wadahadal fiidiyow ah oo heer sare ah
Musuq-maasuqa, eexda, wax-is-daba-marinta...sida looga hortagi karo maamulka deegaanka? Janaayo 17th, 2022Tranquillus
socdaKa shaqaynta deegaanka ee caafimaadka iyo fayo-qabka dadka